လာနီညာကြောင့် အအေးပိုခြင်း၊ လေပွေလှိုင်းများ တိုက်ခတ်ခြင်းနှင့် အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာခြင?? - Yangon Media Group
လာနီညာကြောင့် အအေးပိုခြင်း၊ လေပွေလှိုင်းများ တိုက်ခတ်ခြင်းနှင့် အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာခြင??
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄-လာနီညာ ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ တွင်အအေးပိုခြင်း၊ လေပွေလှိုင်းများ တိုက်ခတ်ခြင်းနှင့် အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာသွန်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြား မှုဦးစီးဌာနက နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက် နေ့လည်က ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန် ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဆောင်းရာသီကာလ တွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် လာနီညာအ ခြေအနေ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်ထုတ် ပြန်ချက်တွင် အီကွေတာအနီးရှိအပူပိုင်း ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၏အရှေ့ဘက် (Estern Tropical Pacific Ocean) ၏ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အပူချိန်သည် သိသိသာသာလျော့ နည်းနေပြီး လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော လေထုဖြစ်စဉ်များမှာလည်း အင် အားအနည်းငယ်ရှိသည့် လာနီညာ အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ထုတ်ပြန်ချက်တွင် လာနီညာ ဖြစ်ပေါ်မှုခန့်မှန်းသည့်သင်္ချာပုံစံ မော်ဒယ်များအရ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီ ဇင်ဘာလအထိ အားအနည်းငယ်ရှိသည့် လာနီညာဖြစ်ရန် ၇၂ ရာ ခိုင်နှုန်းအထိရှိလာပြီး ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် နှစ်ဦးပိုင်းတွင် ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်သို့ပြန် လည်ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံ တကာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပင်လယ် ပြင်အပူချိန်လေ့လာစောင့်ကြည့် ရေးဗဟိုဌာနများမှထုတ်ပြန်ထား ကြောင်း၊ လာနီညာဖြစ်စဉ်သည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်ဖြစ်ပေါ်သည့်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သော်လည်း အဆိုပါလာနီညာဖြစ်စဉ်ကြောင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် ဆောင်းရာသီကာအတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုန်တိုင်းများ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာ နိုင်ခြင်း၊ ဆောင်းရာသီကာလ အရှေ့မြောက်မုတ်သုံလေအား ကောင်းမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ညအပူချိန်များလျော့နည်းခြင်း၊ အအေးပိုခြင်း၊ အရှေ့ဘက်မှလေ ပွေလှိုင်းများတိုက်ခတ်ခြင်း၊ အချိန် အခါမဟုတ် မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်စဉ် များပိုမိုဖြစ်လာခြင်းစသည့် ရာသီ ဥတုဖြစ်စဉ် များဖြစ်ပေါ်လာနိုင် ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားသည်။
မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန် ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦးက ”လက်ရှိအခြေ အနေက အားနည်းတဲ့လာနီညာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျ တော့ အားကောင်းတဲ့လာနီညာမှ သာ မြန်မာနိုင်ငံကိုပိုပြီးတော့အ ကျိုးသက်ရောက်တာပေါ့။ လက်ရှိ ထုတ်ပြန်တာကတော့ အားနည်း တယ်။ သို့သော် လာနီညာရဲ့သက် ရောက်မှုသည် အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာတာတွေ၊ ပုံမှန်အပူချိန်ထက် ကျတာမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့။ အား နည်းတဲ့လာနီညာဆိုသော်လည်း တစ်ခါတလေကျတော့ အားကောင်း သွားတာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ဒါတွေကို ပြည်သူလူထု သတိပြုမိစေချင်လို့ ထုတ်ပြန်ပေး တာဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုတင်သတိထား မိစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ် စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိထားစောင့် ကြည့်နေပါတယ်”ဟု နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင်ပြောသည်။
ကေဘယ်ကား ပြေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းမှ မီးသတ်နှင့် ကယ်ဆယ်ရေး ဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းပို့ချထား သံဃာန
သင်္ကြန်နီးကာလ လက်မှတ်ဝယ်မရသည့် လမ်းကြောင်းတူ ခရီးသည် ယာဉ်တစ်စီးစာရှိပါက ကား စီစဉ်ပေးမည်
စစ်ကိုင်းမြို့၏ တတိယမြောက် ပန်းခြံကို ပညာရေးတက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း) အဝင်လမ်းမကြီး မုခ်ဦးအနီး?